Paul Gauguin dia mamerina ny fitsangantsanganana tahiti sy Polynesia frantsay amin'ny volana Jolay
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Paul Gauguin dia mamerina ny fitsangantsanganana tahiti sy Polynesia frantsay amin'ny volana Jolay
Paul Gauguin Cruises dia niverina tany Tahiti sy Polinezia frantsay tamin'ny volana Jolay
Paul Gauguin Cruises, mpandraharaha ny m / s Paul Gauguin, dia faly manambara ny fiverenan'ny fitsangantsanganana sambo kely any Tahiti sy Polinezia frantsay nanomboka ny volana Jolay 2020 sy ny "COVID-Safe Protocol".
Polinesia frantsay dia misokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena amin'ny 15 Jolay 2020. Paul Gauguin Cruises dia hanolotra ny dia an-tanety Tahiti & ny Nosy Society 7 alina hiainga ny 11 Jolay sy ny 18 Jolay 2020 ho an'ny tsena Polinezia frantsay eo an-toerana. The Tahiti & the Society Islands miainga ary miverina any Papeete, Tahiti, ary misy fitsidihana an'i Huahine sy Motu Mahana (nosy tsy miankina amoron'ny morontsirak'i Taha'a), miaraka amin'ny roa andro ao Bora Bora (misy fidirana isan'andro amoron-dranomasina tsy miankina), ary roa andro ao Moorea.
Paul Gauguin Cruises dia handray ireo vahiny eo an-toerana sy avy any ivelany amin'ny diany 10-alina Society Islands & Tuamotus fitsangatsanganana manomboka ny 29 Jolay 2020, avy any Papeete, Tahiti. Ankoatry ny fandehanana an-tsambo ny nosy Huahine, Bora Bora, Motu Mahana, ary Moorea, ity zotram-piaramanidina ity dia misy fiantsoana ihany koa any amin'ireo nosy Rangiroa sy Fakarava ao amin'ny Tuamotu Archipelago izay fantatra amin'ny lakandranon'izy ireo mahavariana izay tototry ny fiainana an-dranomasina. Tamin'ny volana aogositra 2020 sy ny sisa, Paul Gauguin Cruises dia mamerina ny sambo Tahiti, Polynesia frantsay ary Pasifika atsimo namboarina 7- ka hatramin'ny 14 alina teo aloha.
Ny fiarovana sy fiarovana ny vahiny sy ny ekipan'ny ekipa dia mijanona ho laharam-pahamehana amin'ny Paul Gauguin Cruises. Ny haben'ny m / s Paul Gauguin, ny fotodrafitrasa ara-pitsaboana sy ny ekipa ao anaty sambo, ny protokolota ary ny maha matihanina ny ekipazy, dia nanome toky fa tsy nisy tranga Covid-19 fandotoana.
Mba hiomanana amin'ny famerenana ny hetsika, Paul Gauguin Cruises sy PONANT dia miara-miasa amin'ny IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection of Marseilles, iray amin'ireo ivon-toerana lehibe manerantany eo amin'ny sehatry ny areti-mifindra, ary koa amin'ny Battalion of Marine Afo any Marseille.
Ny protokolom-pahasalamana "COVID-Safe" dia novolavolain'i Paul Gauguin Cruises sy PONANT ary miorina amin'ny fenitra ara-pahasalamana mihoatra ny lalàna iraisam-pirenena. Io fotodrafitrasa io dia miorina amin'ny fitsipiky ny fiarovana roa heny: fanaraha-maso 100 isan-jato ny olona sy ny entana alohan'ny hidirany, avy eo indray mandeha an-tsambo dia ampiharina ny protokolà fahasalamana henjana.
Ankoatry ny fomba fanadiovana hentitra notoroan'ny Centers for Disease Control (CDC) sy ny World Health Organization (WHO), ny fampiharana ny fepetra takiana amin'ny halavirana ara-tsosialy sy ny fanatsarana ny fiofanana ho an'ny mpiasa, ny fepetra vaovao nataon'i Paul Gauguin Cruises dia:
Alohan'ny hidirany, ny vahiny sy ny ekipa rehetra ao amin'ny ekipa dia tsy maintsy manolotra taratasim-panafody dokotera voasonia, hameno ny fanontaniana momba ny fahasalamana, ary hanao fizahana ara-pahasalamana sy fizahana ataon'ireo mpiasan'ny sambo.
Ny valizy rehetra dia handalo faritra mamono otrikaretina amin'ny alàlan'ny fanadiovana zavona na jiro UV.
Saron-tava fandidiana sy lamba, tasy fanadiovana otrikaina ary tavoahangin-dranona mpanadio tanana no homena ny vahiny.
Rano madio vaovao 100 isan-jato amin'ny staterooms, amin'ny alàlan'ny rafi-panafody tsy miverina. Ny rivotra misy rivotra dia havaozina any amin'ny faritra iraisana farafahakeliny dimy isan'ora.
Ny layout fisakafoanana dia nohavaozina ary hanolotra safidy fisakafoanana a la carte tsy misy ifandraisany fotsiny.
Ny habaka ampahibemaso, toy ny efitrano fanaovana spaoro sy teatra dia hatokana ho an'ny 50 isan-jaton'ny olona.
Famonoana olona isaky ny ora be dia be, toy ny tahony varavarana sy fantsom-batana, miaraka amin'ny peroxyde EcoLab, izay manala ny 100 isan-jaton'ny mikraoba, bakteria ary manohitra ny fandotoana biolojika.
Ny mpikambana ao amin'ny sambo dia takiana mba hisaron-tava na hodi-maso fiarovana rehefa mifanerasera amin'ny vahiny. Angatahina ny vahiny mba hisaron-tava amin'ny lalantsara ary hamporisihina amin'ny toerana malalaka.
Ny Gauguin dia fitaovana miaraka amin'ny fitaovam-pitsaboana efa mandroso, ao anatin'izany ny tobin'ny laboratoara finday izay ahafahana manao fitiliana eny an-toerana noho ny aretina mifindra na tropikaly. Misy fitaovana diagnostika mandroso toy ny ultrasound, radiology ary fandalinana biolojika momba ny ra, ary dokotera iray sy mpitsabo mpanampy iray no hita isaky ny mandeha.
Ny zodiac dia ho voan'ny otrikaina tsara aorian'ny fijanonana tsirairay.
Ny fidirana indray aorian'ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina dia avela aorian'ny fizahana mari-pana sy famonoana otrikaretina (olona sy fananana manokana).
Natao manokana handehanana any amin'ireo farihy madio any Polinezia frantsay, The Gauguin dia manome traikefa akaiky sy azo itokisana momba ny Ranomasina atsimo sy trano honenana, serivisy miavaka, fisakafoanana gourmet ary fandraisana vahiny polinesianina.
Voatonona ny filoha vaovao sy ny CEO an'ny San Diego Tourism Authority